Hooyo Soomaaliyeed oo horay 8 caruur ah looga qaatay oo sheegtay in ay maxkad dalban doonto ( Dhageyso) | Qurbaha.Net :: Isha Wararka Soomaalida Qurbaha
Home Somali News Hooyo Soomaaliyeed oo horay 8 caruur ah looga qaatay oo sheegtay in...
Hooyo Soomaaliyeed oo horay 8 caruur ah looga qaatay oo sheegtay in ay maxkad dalban doonto ( Dhageyso)
Stockholm Dowladda Sweden oo horay ugu qaadatay 7 caruur oo ay dhashay hooyo Soomaaliyeed oo ku nool dalkaas ayaa hadana sanadkii dhamaaday ee 2020 waxa ay mar kale ka qaadatay ilmaheedii 8 aad oo mudo saacado ah dhalanaa.
Hooyadaan Soomaaliyeed oo lagu magacaabo Faadumo Baraanbur ayaa soo fadhisatay kanaalka ay ku leedahay Youtube-ka iyadoo sheegtay in ugu horeyn ay talo saaran doonto illaah SWT, balse ay qorshayneyso in ay maxkamad u furto qaar ka mid ah ilmaheeda ku maqan gacanta dowladda Sweden.
Faadumo waxa ay sheegtay in labada ilmood ee ugu waaweyn caruurteeda ay la leedahay xariir wanaagsan waqti welibana ay mar weliba iska warhayaan, balse waxa ay carabka ku dhifatay in ay dooneyso maalmaha soo socda in maxkamad ay u furto caruurtaasi si dib loogu soo celiyo caruurteeda.
Hooyadaan Soomaaliyeed ayaa sheegtay in aysan jirin wax kiis cad ah oo lagu heysto balse dowladda Sweden ay iska heysato caruurteeda, iyadoo dadka Soomaaliyeed ka dalbatay in ay ducu ugu kabaan maxkamadda ay doobneyso in ay la fuusho Sweden.
Horay waxa ay u sheegtay Faadumo in ay tahay hooyo isku filan oo caruurteeda heysan karta, balse aysan aqoon sababta looga qaatay, waxaana mar weliba hadaladeeda ka muuqday sida uu u adagyahay iimaankeeda iyo Alle ku xirnaashiyeeda.
Hooyadaan ayaa ilmihii u dambeeyay waxaa laga qaatay bishii 8-aad ee sanadkii tagay iyadoo dhalan saacado qura taasi o owadatr ahaan ilmaha laga qaatay ka dhigeysa 8 caruur ah.
Hoos Ka dhageyso Codka Hooyo Faadumo
Previous articleQaar ka mid ah Xisbiyada Norwey oo garab istaagay qoyskii Soomaalida ee dhawaan guriga qasabka looga saaray.
Next articleDad ku dhintay Qabow aad u daran oo ka jira Mareykanka iyo saameyn uu ku yeeshay Soomaalida (VOA)